Korea ပရိတ်သတ်တွေက`White Day´ မှာ ကိုယ်နဲ့အတူ ရှိစေချင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို Vote ပေးခဲ့ကြ - MoviesFan
Movie News (833)
Korea ပရိတ်သတ်တွေက`White Day´ မှာ ကိုယ်နဲ့အတူ ရှိစေချင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို Vote ပေးခဲ့ကြ
`White Day´ ဆိုတဲ့ နေ့လေးကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အရမ်းကို Romance ဆန်စွာနဲ့ကုန်ဆုံးကြတဲ့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ၁၄ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ `White Day´ နေ့လေးကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ Valentines နဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်လို့ပြောလို့လဲရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် Valentines မှာ အမျိုးသားတွေက ကိုယ်သဘောကျနှစ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကို ချောကလက်နဲ့လက်ဆောင်တွေပေးကြသလိုပဲ White day မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်သဘောကျတဲ့အမျိုးသားတွေကို ချောကလက်နဲ့ လက်ဆောင်တွေပြန်ပေးတဲ့နေ့လို့လဲ ယူဆလို့ရပါတယ်။(တခါတလေမှာတော့ ခင်မင်ရင်းနှီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေးစားအားကျရတဲ့သူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။) ဒီအလေ့အထကိုအများဆုံးကျင့်သုံးကြတာကတော့ ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ဗီယက်နမ်စတဲ့ နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ တော်တော်ကို ခေတ်စားနေတဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကျင်းပတဲ့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပရိတ်သတ်တွေက လာမယ့် ၁၄ရက် မတ်လမှာကျရောက်မယ့် `White Day´ နေ့လေးမှာ ကိုယ်နဲ့အတူရှိစေချင်တဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို Vote ပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အသက်၂၀မှ ၄၀ကြားရှိတဲ့ အမျိုးသားအမျိုးသမီး အယောက်၂၀၀၀ကို Vote ပေးရွေးချယ်ခိုင်းရာမှာတော့ Gong Yoo နဲ့ Suzy တို့နှစ်ဦးက Voting အများဆုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ Gong Yoo က ၁၅.၂ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပထမနေရာ၊ Park Bo Gum က ၁၅.၁ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ဒုတိယနေရာ၊ Song Joong Ki ကတော့ ၃.၇ရာခိုင်နှုန်း နဲ့တတိယနေရာကို ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
😁☕💕 . . #공유 #공지철 #GONGYOO #ggong #コンユ #Actor #KoreanActor #PhotoShoot #Commercials #맥심카누 #카누 #KANU 👀👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼 #ggong_카누
A post shared by 공 유 | 공 지 철 | GONG YOO (@gongyoo7010) on Mar 22, 2016 at 2:49am PDT
👀💕 . . #공유 #공지철 #GONGYOO #ggong #コンユ #Actor #KoreanActor #movie #영화 #남과여 #A_MAN_AND_A_WOMAN #PhotoShoot 👀👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼#ggong_IV
A post shared by 공 유 | 공 지 철 | GONG YOO (@gongyoo7010) on Feb 19, 2016 at 6:11pm PST
အသက်ရွယ်အလိုက်ပြန်လည်ပြီးရွေးချယ်ရာမှာတော့ အသက်၄၀အရွယ်အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ `White Day´ ကိုအတူဖြတ်သန်းချင်တဲ့အနုပညာရှင်ကတော့ ၁၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိတဲ့ Gong Yoo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၂၀အရွယ်အမျိုးသမီးပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ရွေးချယ်မှုကတော့ ၁၇.၂ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့တဲ့ Park Bo Gum ပဲဖြစ်ပါသတဲ့ရှင်။
A post shared by 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌 (@skuukzky) on Jan 26, 2018 at 1:19am PST
오늘도 와줘서 고맙구 잘자요 내 몫까지 🎀💓
A post shared by 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌 (@skuukzky) on Feb 2, 2018 at 5:06am PST
အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေထဲမှာတော့ Suzy က ၁၀.၅ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ပထမနေရာ၊ AOA အဖွဲ့ဝင် Seolhyun က၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ဒုတိယနေရာ၊ IUကတော့ ၅.၅ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တတိယနေရာ၊ Park Shin Hye က၃.၁ရာခိုင်နှုန်း နဲ့စတုတ္ထနေရာ၊ Han Ji Min ကတော့ ၂.၈ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ပဉ္စမနေရာ တို့ကို vote ပေးရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပရိတ်သတ်ကြီးကရော `White Day´ မှာ ဘယ်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းချင်လည်းဆိုတာ ရွေးချယ်ကြည့်ပါဦးနော်။ ပြီးတော့ မတ်လ၁၄ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် `White Day´ နေ့လေးမှာ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့ ဘယ်လိုလူလေးတွေနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းချင်လည်းဆိုတာ စဉ်းစားရင်း လက်ဆောင်လေးတွေပြင်ဆင်ရင်း မတ်လ၁၄ရက်နေ့ကိုရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင့်။
မြန်မာနိုင်ငံက Single ကိုကို မမ တွေရေ `White Day´ လေးကို `Valentine Day´ ထက်ပိုပြီး Romance ဆန်ဆန်လေးဖြတ်သန်းလိုက်ကြရအောင်နော်……….
Refrence : Soompi.com
Naing Naing	No Comments
Previous Post: Park Bo Gum လေးကတော့ ‘Hyori’s Homestay 2’ အစီစဉ်မှာ YoonA နဲ့ Lee Hyori တို့ကို Surprise လုပ်ခဲ့
Next Post: Variety Show အသစ်တစ်ခုမှာပါဝင်မယ်လို့ Park Shin Hye နဲ့ So Ji Sub တို့နှစ်ဦး အတည်ပြုခဲ့
Haters တွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ Khloe Kardashian December 13, 2018
Season3နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပထမဆုံး Announcement လုပ်လိုက်တဲ့ Stranger Things December 13, 2018
Dr. Strange2ထွက်ရှိလာတော့မည်… December 13, 2018
Avengers မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ချင်နေတဲ့ Noah Centineo December 12, 2018
2019 Oscars ပွဲမှာ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ်က အပယ်ခံလိုက်ရပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ Kevin Hart December 12, 2018
24th Annual Critics Choice Awards ပွဲအတွက် Nomination စာရင်းမှာ ၁၂ နေရာပါဝင်နေတဲ့ Black Panther December 12, 2018
ပထမရက်မှာတင် ကြည့်ရှုသူစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Avengers: Endgame December 11, 2018
action Action & Adventure Adventure Animation Anime Award Bollywood celebrity news chinese Comedy Crime dating news DC Documentaries Drama Family Fantasy Historical Hollywood Horror Indian Cinema Industry Japan KDrama Korea List live-action/animation Marvel Musical Myanmar Film myanmarmovie Mystery & Suspense Netflix Oscar People Romance science Science Fiction Series Superhero Thriller Trailer True story upcoming Walt Disney